मुकुन्देलाई गालि गर्ने र उनलाई नचिन्ने सबैले हेर्नै पर्ने भिडियो – Etajakhabar
काठमान्डौ केहि सम – य अघि रत्नपार्क रुखमा बसेर तथानाम बोल्ने मुकुन्द घिमिरेलाई तपाइले बिर्सनु भएको छैन होला। उनि नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व गरेर अघि आउन नसके पनि समाजमा रहेर हरेक कुराको विश्लेषण गर्ने मध्येका एक हुन्।
रत्नपार्कलाई केहि व्यवस्थित पार्दै जाँदा उनि बस्ने रुखहरु ढलाइए पछि अचेल उनि भृकुटी मण्डप वरपर देखा पर्छन्। हिमचुली खबरको टिम त्यहाँ पुग्दा मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देका वरपर थुप्रै उनका शुभ चिन्तकहरु देखिन्थे।
उनि राजनीतिक बिषय बस्तुमै केन्द्रित भै कुरा गरि रहेको हामीले सुन्यौ। त्यस पछि उनि संग केहि भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो। संगै त्यो भालाकुसारिलाई हामीले क्यामेरामा कैद गर्यौं। कुरा गर्दै जाँदा उनले विभिन्न विषयमा खुलेरै बोले जुन तपाइहरुले पनि हेर्ने पर्ने हुन्छ। ﻿
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४ समय: १४:३१:५८
मन्त्री लालबाबु पण्डितको कुराले के बुझ्ने ? पोखरामा विमानस्थल बन्दैन ? हेर्नुस यस्तो छ मन्त्रीको भनार्इ
खानेपानी अफिस भित्र लफडा, हेर्नुहोस लापरवाही, तपाईले पिउने पानी यति सम्म फोहोर छ (भिडियो)
नाकबाटै गीत र बाजा बजाउने विचित्रका कलाकार भेटीए जसले मोटुपत्लु र पाँडेको समेत दुरुस्त क्यारिकेचर गर्छन् (भिडियो)